Ronald Koeman Oo Sharaxay Sababta Uu Lionel Messi Uga Reebay
Barcelona ayaa u safreysa Ukraine si ay u la ciyaaraan Dynamo Kyiv kulan ka tirsan wareega group-yada Champions League habeenka Talaadada, laakiin waxaa ka maqan ciyaartoyda laf dhabarta u ah Lionel Messi iyo Frenkie de Jong.
Chelsea barbardhac 0-0 ah
Falanqeynta kulanka xiisaha leh ee Manchester United vs Manchester…
Ronald Koeman ayaa shaaca ka qaaday in labada xiddig la nasasiiyay ka dib guuldaradii niyadjabka laheyd ee Sabtidii ka soo gaartay Atletico Madrid, waxay aheyd guuldaradii ugu horeysay abid ee ka soo gaarta tababare Simeone.
“Waxaan go’aansanay inaan kaxeysaneynin Messi iyo De Jong” ayuu Keoman ka sheegay shirkiisa jaraa’id ee maanta.
“Xaaladeena Champions League waa mid raaxo badan, waxayna u baahan yihiin nasasiino.”
Qaab ciyaareedka liita ee Barcelona ayaa keentay in Koeman iyo ciyaartoyda ay la kulmaan eedeyn badan isbuucyadii ugu danbeysay laakiin tababaraha reer Holland ayaa sheegay inuu diirada saarayo shaqadiisa oo uusan dheg u dhigi doonin buuqa ka imaanaya warbaahinta iyo taageerayaasha.
“Waan ognahay xaalada ay kooxda ku jirto iyo waxa soo socda” ayuu yiri. “Waan ku faraxsanahay shaqada ay qabanayaan ciyaartoyda laakiin kuma faraxsani wadarta dhibcaha aan heysano.
“Leo Messi mar walba waxa uu saameyn badan ku lahaa guulaha kooxdan, welina wax badan ayuu ina sii siin karaa. Waxaan iga dhaadhacsan inuu weli yahay ciyaaryahan aan u baahanahay.”
This One Easy Trick Will Make All Your Meals Wholesome, Say Consultants
Kooxaha Todobaadkan Xaqiijisan Kara U Soo Bixitaanka Wareega